သတိပြုရန်; ပြင်သစ် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ
ငွေကြေးနှင့် ကုန်စည်များအတွက် သတင်းဖြစ်ရပ်အကြောင်းတရားများကိုအခြေခံ၍သုံးသပ်ခြင်း
ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ မေလ ၇ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ပြင်သစ် ရွေးကောက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်ပါ! သမ္မတလောင်းနှစ်ယောက် အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ယူရိုဇုန်ကနေ ခွဲထွက်လိုတဲ့ လက်ယာစွန်း နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင် မာရင်းလီဖန်းပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။. တခြားတစ်ဘက်မှာတော့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ အီးယူအဖွဲ့ကြီးကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေချင်တဲ့ ဗဟိုနိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင် အီမန်နျူရယ် မက်ခရွန် ဖြစ်ပါတယ်။
မက်ခရွန် အနိုင်ရနိုင်ခြေ များနေတာကြောင့် ငွေကြေးဈေးကွက်မှာ အတက်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သဘောထားစစ်တမ်းတွေအရ မက်ခရွန်က လီဖန်းကို ၆၅%အသာနဲ့ အနိုင်ရရှိသွားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒုတိယအကျော့ ဖိုင်နယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မာရင်လီဖန်း အနိုင်ရဖို့ ဆိုရင် ပထမအကျော့မှာ ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Fillon, Hamonနှင့် Mélenchonတို့ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကပါ လီဖန်းဘက် ပါလာမှ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ထိုကဲ့သို့ ပါလာဖို့ မရှိနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။
ပြင်သစ်ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပြီး အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ မှတ်ထားမှာ တစ်ခုက ပထမအကျော့မှာ ဘယ်သူဘဲ အနိုင်ရခဲ့ရခဲ့ အသာရခဲ့ ရခဲ့ ထိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့သူပဲ သမ္မတဖြစ်လာမယ်လို့ တွက်ဆလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ စဉ်းစားရမှာ တစ်ခုကလဲ မဲပေးမယ့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေက သူတို့အိမ်မှာပဲရှိနေကြပါသေးတယ်။ အကုန်ထွက်လာ ကြသေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကုန်ထွက်လာပြီး မဲပေးတဲ့အခါ မက်ခရွန် တစ်ယောက် အသာရဖို့ရာ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီး ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ လီဖန်းကို ထောက်ခံတဲ့သူတွေက သူတို့ သမ္မတလောင်းကို အလွန်ချစ်ကြပြီး သမ္မတတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက် အလွန် စိတ်အားထက်သန်လျှက်ရှိပါတယ်။ မက်ခရွန်ရဲ့ ထောက်ခံအားပေးသူတွေကလဲ အလွန်များပြားတဲ့အတွက် ဒီအပတ် တနင်္ဂနွေမှာတော့ တကယ့်ကိုပဲ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့် ဘယ်သူအနိုင်ရမလဲဆိုတာ သေချာအောင် ခန့်မှန်းမရနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ ဈေးကွက်မှာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကို သတိထားပါ။
ယခု ဒုတိယအကျော့မှာ ဘယ်လိုရလာဒ်ထွက်ထွက် မှတ်ထားရမှာကတော့ မက်ခရွန်အနိုင်ရလဲ EURမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အတက်အကျတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး လီဖန်းအနိုင်ရသွားရင်တော့ ယူရိုငွေကြေး တန်ဖိုးကျဆင်းပြီး ရွှေတန်ဖိုး တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
09.10.2018 11:47 GBP/USD ရောင်းဝယ်ရန် နောက်ထပ်အခွင့်အရေးကောင်းပါ
လစဉ် GDP တိုးတက်မှုကိန်းဂဏန်းများသည် ဗြိတိန်တွင် ၁၁:၃၀ MT အချိန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀တွင် ထုတ်ပြန်ပါမည်။
31.07.2018 16:01 ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 31 July 2018
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 31 July 2018
forex ကုနျသှယျ gold ကုနျသှယျရေး bitcoin forex signals အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း litecoin ဘလော့ချိန်း forex ပညာပေးသင်ကြားရေး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး